Kismaayo News » Axmed Madoobe oo la kulmay qaar kamid ah xildhibaanada qaranka
Axmed Madoobe oo la kulmay qaar kamid ah xildhibaanada qaranka
Kn: Madaxweynaha dawlad gobolleedka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo casho sharaf is xog waraysi u sameeyay xildhibaanada labada gobole kuwooda ka soo jeeda Jubbaland.
Xildhibaanada iyo madaxweynaha Jubbaland ayaa is dhaafsaday macluumaad ku saabsan halka guud ahaan dalku, gaar ahaanna Jubbaland ay marayso. Waxay sidoo kale afkaar iska waydaarsadeen sidii Shabaabka dalka looga xorayn lahaa iyo qaabka ugu sahlan ee xildhibaanadu uga qayb qaadan karaan jihaynta siyaasadda dalka iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada.
Axmed Madoobe ayaa xildhibaanada u jeediyay inay deegaamadii laga soo doortay gaaraan oo aysan Xamar uun iska dhex fadhiyin si ay duruufaha dhabta ah ee shacabku ku sugan yahay u arkaan, waxna uga gaystaan. Waxa ugu yar ee ay qaban karaan ayuu ku sheegay inay qayb kamid ah mushaar kooda u qoondayn karaan maal-galinta deegaamadii ay ka yimaadeen iyo la dagaalanka Alshabaab.
Sidoo kale, mar uu soo hadal qaaday shirka madaxda qaranka uga socota Muqdisho iyo kii maamul gobolleedyadu ku qabsadeen Kismaayo ayuu ka dhawaajiyay in ay Alle mahaddii tahay in maanta madaxdii Soomaalida oo kaligood ah inta qol isku soo xirteen ayagoon ajinabi ku kala dhex jiray ay ka shawrayaan aayaha dalka iyo xalinta khilaafaadka soo dhex galay. Wuxuu sheegay in shirkii Kismaayo uu dhalay in shirkan Xamar la isugu yimaado, hadii uusan gogosha Kismaayo fidin lahayna ay u badnaan lahayd in dalal kale loo kala dacawoodo oo markaasi ay ayagu Soomaalida wada hadashiiyaan sidii marar hore dhacday.
Axmed Madoobe oo xildhibaanada u muujiyay niyad samaan iyo in Soomaaliya xaaladdeedu ay maalinba maalinta ka danbaysa ka soo fiicnaanayso, wallow ay jiraan caqabo ayaa sheegay in shirka Xamar ka socda uu guul ku dhamaan doono, laakiin xildhibaanada looga baahanyahay inay kaalintooda ka soo baxaan oo sharuucda iyo xeerarka dalka u yaala turxaan bixiyaan kadibna kula xisaabtamaan qof kasta oo ku tunta.